အထွေထွေရောဂါများ Measles (ဝက်သက်ရောဂါ...
ဝက်သက်ရောဂါသည် ကလေးများတွင် အဖြစ်များပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
ဝက်သက်ရောဂါ၏ လက္ခဏာများသည် ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရပြီး ၁၀ ရက်မှ ၁၄ ရက်အကြာတွင် ပေါ်လာတတ်သည်။ လက္ခဏာများ အနေဖြင့်
- Koplik’s spots - ပါးစပ်ထဲ ပါးအတွင်းပိုင်းတွင် အနီရောင်ပေါ်တွင် အဖြူရောင်အစက်များ တွေ့ရခြင်း
- အရေပြားတွင် အနီရောင်ပြင်များ ပေါ်လာခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။
ဖြစ်စတွင် ရိုးရိုးဖျားနာသကဲ့သို့သာ ဖြစ်တတ်ပြီး ၂ ရက် ၃ ရက်ခန့် ကြာတတ်သည်။ ထို့နောက် မျက်နှာနှင့် နားနောက်ပိုင်းတွင် ဆံပင်ပေါက်ရာလိုင်းတစ်လျှောက် အနီရောင်အင်ပြင်များ ထလာတတ်သည်။ ရက်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ လက်မောင်း၊ ကိုယ်၊ ပေါင်နှင့် ခြေလက်များသို့ ပျံ့လာကာ ကိုယ်အပူချိန်မှာလည်း ရုတ်တရက် တက်လာမည်ဖြစ်သည်။ အင်ပြင်မပေါ်ခင် ၄ ရက်နှင့် အင်ပြင်ပေါ်ပြီး ၄ ရက်အကြာတွင် တခြားသူများထံသို့ ကူးစက်တတ်သည်။
ဝက်သက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားရသော အကြောင်းရင်းမှာ ရောဂါပိုးရှိသောသူ နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးရာမှ တစ်ဆင့် လေထဲသို့ ရောက်သွားပြီး တခြားလူမှ ယင်းလေကို ပြန်လည်ရှူရှိုက်မိရာမှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သည်။ ရောဂါပိုးရှိသော မျက်နှာပြင်ကို ထိကိုင်မိပြီးနောက် ထိုလက်ကို ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းထဲသို့ ထည့်ခြင်း၊ မျက်လုံးကို ပွတ်ခြင်းများကြောင့်လည်း ကူးစေနိုင်သည်။
- ဝက်သက်ကာကွယ်ဆေး မထိုးထားသူများ
- ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများသို့ အလည်အပတ်သွားသူများ
- ဗီတာမင် အေ ချို့တဲ့နေသူများ ဖြစ်သည်။
. နားထဲသို့ ပိုးဝင်ခြင်း
. လေပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် အသံအိုးရောင်ရမ်းခြင်း
. ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း၊ လမစေ့ဘဲ မွေးဖွားခြင်းနှင့် ပေါင်မပြည့်ခြင်းနှင့်
. သွေးဥမွှားနည်းခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဝက်သက်ရောဂါသည် ပြင်းထန်သော နောက်ဆက်တွဲရောဂါများ ဖြစ်စေနိုင်သည့်အတွက် သင်ကိုယ်တိုင်(သို့) သင်၏ကလေးငယ်တွင် ဝက်သက်နှင့် ဆင်တူသော အင်ပြင်များ ဖြစ်နေပါက နီးစပ်ရာဆေးရုံဆေးခန်းသို့ သွားရောက်ပြသသင့်ပါသည်။
ဝက်သက်ရောဂါ ဟုတ်မဟုတ် သိရှိစေရန် ပါးအတွင်းဘက်တွင် Koplik’s spot ဟုခေါ်သော အစက်ငယ်များ ရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် သွေးစြစ်ခင်းတို့ဖြင့် သိရှိနိုင်သည်။
ဝက်သက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားလျှင် အရှင်းပျောက်ကင်းအောင် ကုသ၍ မရသော်လည်း ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ခံထားရသူများကို ၇၂ နာရီအတွင်း ကာကွယ်ဆေးပေးခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ၊ ကလေးငယ်များနှင့် ကိုယ်ခံအားစနစ် မကောင်းသူများကို Immune serum globulin ပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာများ သက်သာစေရန် အဖျားကျဆေးများ ပေးခြင်း၊ နောက်ဆက်တွဲရောဂါများ ဖြစ်သော အဆုတ်ရောင်ခြင်းနှင့် နားထဲပိုးဝင်ခြင်းတို့အတွက် ပိုးသတ်ဆေးများ ပေးခြင်း၊ ဗီတာမင်အေ ချို့တဲ့သူများကို ဗီတာမင်အေများ တိုက်ကျွေးခြင်းတို့ဖြင့် ကုသပေးနိုင်သည်။
သင်၏ အိမ်တွင် ဝက်သက်ပေါက်သူများ ရှိပါက ဝက်သက်သည် အလွန်ကူးစက်လွယ်သည့်အတွက် တစ်ယောက်တည်းထားခြင်းနှင့် ကာကွယ်ဆေး မထိုးရသေးပါက မြန်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး ကာကွယ်ဆေး သွားရောက်ထိုးနှံသင့်သည်။